27W | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
မုန်တိုင်း ၃ လုံး အပြိုင်ဖြစ်လာမည်လော?
November 24, 2009 — mmweather
စင်္ကာပူအနီးနှင့် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်(ပစိဖိတ် အနောက်ဘက်ပိုင်း)တွင်ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ၂ ခုနှင့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း NIDA တို့ ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး မုန်တိုင်း ၃ လုံး ပြိုင်၍ ဖြစ်လာနိုင်မည့်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေပါသည်။
စင်္ကာပူ၏ မြောက်-အရှေ့မြောက်ဘက် ၃၅၅ မိုင် ခန့်တွင် ယမန်နေ့က ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပြီး မုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းကောင်းနေဆဲဖြစ်သည်ဟု JTWC ကြေငြာချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာသော NIDA (26W) သည်လည်း ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး လာမည့်စနေနေ့ ဂျပန်စံတော်ချိန် နံနက် ၉ နာရီတွင် အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ရောက်ရှိပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြို့တော် မနီလာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက် မိုင် ၈၉ဝ ခန့်၊ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိဗဟိုပြုလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ (အောက်ပုံ)
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 27W (အောက်ပုံ) မှာလည်း ပိုမိုအားကောင်းလာကာ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေနှင့် အနီးဆုံးတည်ရှိနေကာ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ 1200 UTC တွင် မနီလာမြို့တော် အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၅၅ဝ ခန့် (Tangag Airport) မှ မိုင် ၇ဝ ခန့်သို့ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့်ဖြင့်ရောက်ရှိဗဟိုပြုလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာမည့် 27W နှင့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း NIDA အဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားပြီးဖြစ်သည့် 26W တို့၏ ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်းများမှာ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တွင် ဆုံတွေ့ပူးပေါင်းသွားနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး ထိုသို့ ပူးပေါင်းသွားလျှင် မုန်တိုင်းများ၏ လားရာဘက်နှင့် အင်အားအခြေအနေမည်သို့ ပြောင်းလဲ သွားနိုင်မည်ကို ဆက်လက်လေ့လာစောင့်ကြည့်ရဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။ (အောက်ပုံ)
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: 26W, 27W, NIDA, tropical-depression, tropical-storm, weather. 1 Comment »
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်ပိုင်းနှင့် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ အနောက်ပိုင်းတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိကြသည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်းများ(NIDA, BONGANI) နှင့်လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း TWENTY-SEVEN တို့၏ ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၄င်းတို့၏ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေများကို MMWEATHER NING ပေါ်တွင် လေ့လာကြည့်ရှုပေးပါရန် ..
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: 27W, BONGANI, NIDA, tropical-depression, tropical-storm, weather. LeaveaComment »